The Revenant (2015) | Movie Guide !
Home! Action Animation Adventure Murder Thriller Comedy Drama Mystery Romance Sci-Fiction blog ! ရေးခဲ့သမျှ … Home \_ Adventure \_ The Revenant (2015) The Revenant (2015)
သက္ကရာဇ် ၁၈၂၃ . . . . ကပ္ပတိန် Andrew Henry တို့အဖွဲ့ဟာ အနီးအနားတဝိုက် တောနက်တွေထဲမှာ သားမွေးတွေ ရရှိရန် အလို့ငှာ အမဲလိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတိုိ့တတွေ ရရှိထားတဲ့ သားမွေးတွေကို ထုတ်ပိုးပြီး ပြန်ဖို့ရာ ပြင်ဆင်နေဆင် ဒေသခံ Arikara လူမျိုးတွေရဲ့ အလစ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ အဖွဲ့ဝင်တချို့သာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့ပြီး အများစုကတော့ အသတ်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ ထိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတွေထဲမှာမှ Glass ဟာ အမဲလိုက်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ရေမြေဒေသနဲ့ ဒေသခံ တွေအကြောင်း သိရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ Glass ရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့လှေကို စွန့်ခွာပြီး တောထဲမှတစ်ဆင့် သူတို့ စခန်းကို ပြန်ကြပါတော့တယ်။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများစုက သဘောမကျ ကြပါဘူး။ Glass မှာ Hawk ဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်ရှိပြီး လူငယ်အရွယ်သို့ပင် ရောက်ရှိနေပါပြီ။
လမ်းရှာဖွေတဲ့သူတွေ အရှေ့ကသွားနေစဉ်မှာ Glass ဟာ ဝက်ဝံတစ်ကောင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ ဝက်ဝံကို သတ်ဖြတ်နိုင်လိုက်ပေမယ့် Glass တစ်ယောက်လည်း သေလုမြောပါး ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတော့တယ်။ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိသွားတဲ့ Glass ဟာ အသက်ရှင်နိုင်မှာ မဟုတ်တာကြောင့် Glass ကို သတ်ဖြတ်ထားခဲ့ပြီး ခရီးပေါက်အောင် Fitzgerald က ပြောပေမယ့် ကပ္ပတိန် Henry က သဘောမတူပါဘူး။ ကပ္ပတိန် Henry က ပိုက်ဆံအများအပြားပေးပြီး Glass ကို ဖေးမ သယ်ဆောင်လာစေပြီး တကယ်လို့ သေဆုံးသွားခဲ့ရင်လည်း ကောင်းမွန်စွာ မြေမြုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုချက်က Fitzgerald က သဘောတူခဲ့ပြီး သူနဲ့အတူ Jim Bridger လဲ အဖော်အဖြစ်နေခဲ့မှာပါ။ ထို့အတူ Glass ရဲ့သား Hawk လည်း ကျန်နေရစ်ခဲ့ပါတယ်။
လမ်းတဝက်နားနေစဉ် Fitzgerald ကို သတ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကို Hawk က တွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။ ထို့နောက် Fitzgerald ဟာ Hawk ကို သတ်ဖြတ်မိသွားပြီး မလှုပ်မရှားနိုင်တဲ့ Glass ဟာ သူ့သား Hawk အသတ်ခံရတာကို ဘာမှ မကူညီနိုင်ပဲ ဒီအတိုင်းပဲ ကြည့်နေနိုင်ပါတော့တယ်။ Bridger ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ Fitzgerald က Hawk ပျောက်နေပြီး Glass ဟာလည်း ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက် အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့နောက်ကို လိုက်လာတဲ့ ဒေသခံ Arikara လူမျိုးတွေလည်းရှိတာမို့ Glass ကို ထားခဲ့ပြီးသွားဖို့ Fitzgerald ဟာ ညာပြောပါတော့တယ်။ Bridger ဟာ တုံ့စိုင်းနေပေမယ့်လည်း Glass ကို ထားခဲ့ကာ Fitzgerald နဲ့အတူ ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ ဒဏ်ရာရနေတဲ့ Glass ဟာ ဒေသခံ Arikara လူမျိုးတွေရဲ့ ရန်ကလည်း သီသီကလေး လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ Arikara လူမျိုးခေါင်းဆောင် Powaqa ဟာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခံရတဲ့ သူ့သမီးကို လိုက်လံ ရှာဖွေနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူ့သားကိုသတ်သွားတဲ့ Fitzgerald ကို Glass တစ်ယောက် ပြန်တွေ့ လက်စားချေနိုင်ပါ့မလား . . . . . Powaqa ကကော သူ့သမီကို ပြန်ရှာတွေ့နိုင်ပါ့မလား . . . ။ ထိုနောက် ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့ . . . . . . . .
Oscar ဆုနဲ့ အကြိမ်အကြိမ်လွဲချော်နေတဲ့ လီယိုနာဒိုရဲ့ ဒီနှစ်အတွက်လည်း Oscar ဆုအတွက်ရေပန်းစားနေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါ။ လီယိုနာဒိုဟာ ဒီကားမှာ အကောင်းဆုံး ပီပြင်ဆောင် သရုပ်ဆောင်သွားနိုင်တာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ပြသချိန် ၂ နာရီ ၃၆ မိနစ်ရှိပြီး အတော်ရှည်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကြည့်ရှုသူတွေကို ဇာတ်လမ်းအဆုံးထိ ဆွဲဆောင်သွားနိုင်မှာပါ။ IMDB Rating 8.3/10 အထိရရှိထားပြီး Alejandro González Iñárritu က ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ Alejandro González Iñárritu ဟာ Birdman (2015) ကားနဲ့ Oscar ဆုအပြင် တခြားဆုပေါင်းများစွာလည်း ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ The Revenant (2015) ဇာတ်ကားနဲ့လဲ လီယိုနာဒိုနဲ့ ဒါရိုက်တာတို့ဟာ Oscar ဆုအတွက် ရေပန်းစားနေသလို Golden Globe Award ကိုလည်း ပူပူနွေးနွေးရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားကောင်းကြိုက်သူတွေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ခုပါပဲ။
ကရကဋ် | Adventure, Drama, Thriller | 02/02/2016 8:27 pm
ကရကဋ် - Previous
Your comment ...	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> Movie Guide ! - Close